Shariif Xasan iyo Col. Cabdullahi oo Dalka Dibediisa Isugu Muruqyo Xeydanaya
Shariifka ayaa la filayaa inuu Isniinta soo gaaro dalka Mareykanka isagoo dowladda Mareykanka aan ka heli doonin wax soo dhaweynaa. Shariifka ujeedadiisa ugu weyn ee uu u imaanayo Mareykanaka ayaa lagu sheegay iney tahay inuu u yimaado reerkiisa oo ku nool Minnesota. Dalka Mareykanku uma hayo wax sharafa dalka Soomaaliya iyo kuwa hogaanka u haya oo dibjir iyo dembiileyaal u badan.
Col. Cabdullahi ayaa isna xusuldoob ugu jira sidii uu ku imaan lahaa dalka Mareykanka ilaa iyo haddana ma cadda isna ujeedada uu ku soo geli doono cariga Mareykanka. Waxaa la saadaalinayaa in Madaxweynaha Yemen Cali Cabdalla Salax uu si gaara uga codsan doono madaxweynaha Mareykanka George Bush inuu u ogolaado Col. Cabdullahi Yusuf dal ku galka Mareykanka oo horay loogu diidey kadib markii ay Itoobiya u ololeysay arrintaas. Xiriirka Yemen iyo Mareykanka ayaa soo wanaagsanaanayey sanooyinkii dambe iyagoo iskaashi fiican ka yeeshay arrimah quseeya la dagaalanka argagixisada. Siyaasada Mareykanka ayaa waxaa u caado ah in dalalka aysan la lahayn xiriir dhow ay u sii marto dal sadexaad oo ay saaxiib la tahay. Mareykanku hadda ka hor arrimaha Soomaaliya waxa uu u soo mari jirey: Masar, Sacuudiga, Itoobiya, Ugaanda. Hadda waxaa ku soo biiray kooxdaas dalka Yemen oo xiriirka uu la leeyahay Mareykanka uu soo xoogeysanayo. Ma cadda in dowladda mareykanka ay ka dabceyso mowqifkeeda ku aadan Soomaaliya oo gebi ahaanba hadda ka xiran in laga hadlo.
Shariifka iyo Korneylka midna guul kama gaarin xal u helida dowlad la’aanta ka jirta guddaha Soomaaliya. Labaduba hadda waxey xooga saareen iney isugu xoog sheegtaan wadanka dibediisa oo midba midka kale uu u muujinayo taageerada uu ka heysto qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dibeda. Waxaa dibeda ka socda abaabulo lagu kala taageerayo labadaas nin oo ku guuldareystay siyaasadii gudaha. Waxaana kuu muuqanaya naceybku inuu ka horeeyo ismaandhaafka fikradeed. Dadka soo dhaweynaya labadaas nin qofna kuma qanacsana in fikradahoodu ay xal yihiin, laakiin waxaa loo soo dhaweynayaa in shaqsiyaadka wax soo dhaweynaya ay naceybka ay u hayaan shaqsiga kale ay ku muujiyaan dareen soo dhaweyn oo ay u hayaan kan ka soo horjeeda.
Waxaan shaki lahayn marka ragaas ay dhameystaan dabaaldegyada dibeda looga abaabulayo iney ku soo noqonayaan Muqdisho iyo Jowhar. Shariifka wuxuu u ololeynayaa in Muqdisho dibeda looga aqoonsado iney noqoto xaruunta Baarlamaanka sida Itoobiya ay ugu ololeyneyso in Jowhar loo aqoonsado iney noqoto xaruunta ku meel gaarkaa ee dowlada Col. Cabdullahi Yusuf. Waxay dad badan ogsoon yihiin in aqoonsi iyo kalsooni loohayo baarlamaan iyo dowladba ay ka timaado oo keliya dadka dalka u dhashay oo ay mariin habaabin tahay ogolaanshaha laga doonayo dalalka dibeda. Wax kasta oo ay shisheeye ku dhawaaqaan kama ay soconayaan Soomaaliya ama ha magacabaan xaruun ku meelgaara ama caasimad cusub ama xeerar cusub oo hor leh.
Waxay dad badan saadaaliyeen in sannadka cusub ay burbureyso waxyaabihii Kenya lagu soo dhisay, cabsida ugu weyna waxaa laga qabaa iney ka imaaneyso dagaaloogayaasha jooga Muqdishu oo ku dhawaaqa iney ka baxeen dowladii ay soo dhistay Igad, taas oo noqoneysa dhamaadka siyaasada Col. Cabdullahi Yusuf. Waxaa marar badan lagula taliyey Col. Cabdullahi inuu diblomaasiyad adeegsado oo uu tanaasul ku soo gacan gashado dagaaloogayaasha Muqdishu inta uusan ka dhamaan dulqaadka iyo dadaalka ay iskood ugu hayaan nabadeynta iyo dhismo dowladeed oo loo wada dhan yahay.